Indlu esedolophini entle yaseSpeyin embindini welali - I-Airbnb
Indlu esedolophini entle yaseSpeyin embindini welali
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguPeter & Tanya
UPeter & Tanya yi-Superhost
ICasa Concordia ligumbi elinamagumbi okulala ayi-4, indlu yasedolophini eyi-2.5 kwidolophu endala esedolophini ekwaziyo ukubona iintaba. Beka indawo efanelekileyo phakathi kwebhayisekile kunye neparadesi yomntu ohambahambayo,
indawo u akakwazanga ukuba ngcono!
Le ndlu yasedolophini ibuyiselwe ngothando embindini weBenidoleig, ilali entle yasezintabeni ekwimizuzu eyi-15 xa usuka elunxwemeni lweBlue Flag.
Inazo zonke izinto ezifunekayo, njenge-Air Con/ ukufudumeza kwigumbi ngalinye, isitovu seenkuni, i-TV, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, ioveni, izinto zasekhitshini, izinto zebhedi.
Le dolophana intle i-casa inezitepsi ezithi ndijonge ezonyuka kulo lonke ikhaya. Kukho iindawo ezimbini zokuhlala, enye kumgangatho ophambili, kunye nenye indawo yokuphumla kumgangatho wokuqala.
Inemigangatho ephantsi kunye negumbi lokuhlala eliyi-kitchen, indlu yangasese kunye neveranda encinci enendawo yokubraya kunye nemigangatho emibini, nganye inamagumbi okulala amabini, enye inethala kunye nebhedi elala abantu ababini enye inebhedi enye. La manqanaba mabini anegumbi ngalinye leshawa negumbi lokuhlambela elinesinki. I-casa ixhotyiswe nge-Air Con/ ukufudumeza kwigumbi ngalinye.
Iphuli yokuqubha kamasipala ikumgama weemitha eziyi-300 ukusuka endlwini, ikhilomitha eyi-1. I-Cueva de las Calaveras kunye nabathandi be-gastronomy, i-El Temple ikumgama weemitha eziyi-50, kwaye ikumgama weekhilomitha eziyi-4 yi-Casa Impera Restaurant, enikwa i-Michelin Star.
Kukho iindawo ezininzi zokujonga imini nobusuku zokubuka zonke iindawo ezikufutshane zeCasa Concordia.
i-El Cid yindawo ethandwa kakhulu yokutya nokutya okwahlukahlukeneyo kwimenyu kuquka neCawa carvery. Indawo yokudibana yezinto ezenziwayo ezifana nezitya, ithenisi, iintsuku zemibuzo, umdaniso wesidlo sangokuhlwa, i-Barbecues, amaqela okuhamba, kunye neklabhu ye-Bridge, ikwayindawo yokuqubha elungele ukonwabisa abantwana xa unokonwabela omnye umsebenzi.
Itempile ye-El Temple yindawo yokutyela entle yaseSpeyin apho unokufumana khona imenyu ye- del dia engaphantsi kwe-12 € kunye noludwe lokutya okumnandi onokukhetha kuko.
I-La Lloma enye ivenkile yokutyela yaseSpeyin enika ukutya okumnandi.
Iilwandle EZIMANGALISAYO. Ayinabantu baninzi njengeCosta Blanca Beaches.
Imayile kunye neemayile zamalwandle ALUHLAZA, IILWANDLE zomntu wonke, ezolileyo nezifihlakeleyo okanye ngapha nangapha kwemidlalo yamanzi efana nokutyibilika ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, izikhephe zebhanana, ii-jet skis kunye nokunye okuninzi kuxhomekeke kwinto othanda ukuyenza. Eyona nto iphambili kukuba iilwandle azinabantu baninzi, yiloo nto zithandwa kakhulu ngabantu baseSpeyin. Amanzi acocekileyo ngoko makhulu kwiintsapho ezinabantwana abancinci, kungabikho mntu uhla ngequbuliso njengeAtlantiki okanye olunye ulwandle olubi. Ngaselunxwemeni kukho iindawo ezigcina indalo kwiinduli zesanti kwaye izityalo ezininzi zikhuselwe njengonxweme oluninzi eValencia. Iivenkile ezahlukahlukeneyo zekofu, iibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile zezipho, iivenkile ezinkulu zonke eziphumelela kwiinyanga zehlobo ezinye zazo ziyafikeleleka ukusuka elunxwemeni, kuxhomekeka kwindawo oya kuyo. Kufuphi neevenkile kukho oonogada bobomi kunye neziko leRed Cross.
Imibhiyozo ye-Fiestas ibanjelwa ukuhlonipha iSanta Barbara kwiiveki ezimbini zokuqala zika-Agasti. Le yeyona ndawo iphambili yokubaleka kweenkunzi, iinkunzi zihoywe kakuhle kakhulu kwaye ziinkunzi ezisemagqabini kuphela ezisetyenziswayo, zibaleka ezantsi kwesitrato esiphakamileyo ukuya ebaleni.
Ezinye izinto ezenziwa ekuhlaleni: iiklasi zaseSpeyin, iklabhu ye-pensionista, imarike yeveki ethengisa iziqhamo nemifuno kunye nebhendi yasedolophini.
Course Oliva Nova Golf Course inemingxunya eyi-9 okanye eyi-18 ibe ungakhetha ukuba yeyiphi ofuna ukuyidlala, eyilwe ngumdlali wegalufa odumileyo waseSpeyin u-Seve Ballesteros. Le klasi isecaleni kolwandle ekwicomplex yeenkwenkwezi eziyi-5, kukho umyinge wokuqhuba, abaqeqeshi abaziingcali bezifundo zabo bonke ubuchule.
Ibala legalufu laseLa Sella lenziwe nguJosé María Olazábal obalaseleyo. I-La Sella sesinye sezona zifundo zibalulekileyo ezenziwe yintshatsheli ephindwe kabini yeMasters eAgusta.
Ibala legalufu leJavea eliyilwe nguSan Francisco Moreno laza lavulwa ngo-1981. Le ndawo yindawo enomngxuma othe tyaba oyi-9 enee-greens ezigcinwe kakuhle neendlela ezilungiswe yimithi yesundu, imithi yepine kunye nemithi eorenji. Nangona inemingxunya eyi-9 kuphela, kwisihlandlo sesibini okanye ngasemva, imingxunya emininzi idlalwa ngeti eyahlukileyo eyenza ibe yindawo yemingxuma eyi-18.
UBenidoleig uphakathi eAlicante naseValencia. Ufikelela kwi-AP7 Junction 62 landela iimpawu eziya kuPedreguer uze uthathe iCV733 uyise eBenidoleig. Abaququzeleli: Lat: 38.792427 & Long:
-0.0wagen37 Iidolophu zasekuhlaleni ziquka: iOrba, iDenia, iPedreguer, iOndara nezinye iilali ezahlukahlukeneyo ezifana neGabra neTormos
Izinto ezinokusetyenziswa ekuhlaleni: Iivenkile zokutyela, iibhari, iivenkile, iivenkile ezinkulu, iziko lezonyango, ukukhwela amahashe, izitya, ukuhamba ngebhayisekile, iindlela zokunyuka intaba, emva koko kukho iindawo zokuthenga zasekuhlaleni ezifana ne-Odara, iDenia, iPedreguer, Iimarike zokubuka nokuthenga iziqhamo nemifuno. Izikolo ezahlukahlukeneyo zeminyaka eyahlukeneyo, iofisi yeposi, uphicotho, ipuli yokuqubha kamasipala, istudiyo sobugcisa, ibhanki, amayeza, i-newsagent, amazinyo, i-hairdresser, i-florist kunye nebhaki.
Idolophu kunye nezinye iindawo zembali
zaseBenidoleig I-Manor house Baron of Finestrat.
Icawa yaseParish kaKrestu.
Umqolomba weSkullls - iCueva de las Calavares - Kubude bayo obuziimitha eziyi-300, unokuxabisa ixabiso lokuqala le-stalactites, ii-stalagmites kunye nee-domes ezintle ezingaphezu kweemitha ezingama-20 ukuphakama. Ime kwicala elifanayo lendlela eya ePedreguer. I-Benidoleig iivestiges zokuhlala kumbindi kunye ne-Upper Paleolithic, ukususela kumawaka ayishumi elinesihlanu BC.
Umbuki zindwendwe ngu- Peter & Tanya
We are both well travelled, have both worked in foreign aid humanitarian relief, been in business, enjoy music, travel, sailing, skiing and good health.
Favourite quote: "You don't need a weather man to know which way the wind blows" - Bob Dylan
Favourite quote: "Y…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Benidoleig